Unyana osisigidigidi kwiNoveli yoMthetho Isahluko 2193 - 2194 | XperimentalHamid
funda Isahluko 2193 - 2194 yenoveli Unyana osisigidi eMthethweni by INkosi igqabi simahla kwi-Intanethi.
Utata Ingoma ekuqaleni wayecinga ukuba uWarnia uye eJapan ukuya kuxoxa ngokusebenzisana ngeli xesha, kwaye wahlangabezana nentsebenziswano yosapho lweNgoma nabangaphandle. Ukuthintela ukuba angahlangabezani nengozi, angathanda ukuba uWarnia anikezele ngesicwangciso sokwandisa nakuphi na ukusebenzisana naphesheya.
Nangona kunjalo, ebengalindelanga ukuba afumane ikhontrakthi yesisa kwiNippon Steel.
Nippon Steel yinkokeli kushishino ngentsimbi jikelele. Kule shishini, ilungelo labo lokuthetha liphezulu kakhulu. Kwiinkampani ezinje ngeQela leNgoma, ukuba zifuna ukusebenzisana nabanye, kufuneka zingxamele ukubuza.
Ayisiyokuyicela nje kuphela, kodwa ulungiselele umhlaba kunye nabo bonke ubudlelwane bendawo, emva koko umeme iNippon Steel ukuba ize kusebenza.
Olu luvo lufana nokulungisa igumbi lokulala endlwini yakho, emva koko ubalekele emakhayeni abanye abantu ubacele ukuba bahlale iintsuku ezimbalwa.
Isimo sengqondo asinakutshiwo ukuba asifanelekanga.
Ngokubanzi, intsebenziswano engalinganiyo ngolu hlobo, kufuneka izivumelwano ezingalinganiyo zisayinwe.
Esinye sezonavumelwano zixhaphakileyo ezingalinganiyo kukunika imali eninzi kwaye ufumane intloko encinci, kwaye abanye mabenze imali enkulu kunye nentloko encinci.
Nangona kunjalo, ngubani onokucinga ukuba uWarnia angaphazamisa ukulingana phakathi kweQela leNgoma kunye neNippon Steel, avumele iNippon Steel ukuba ihlawule imali eninzi kwaye ithathe intloko encinci. Le yayiyinto engazange ibonwe mntu ngaphambili.
Kwibhodi yabalawuli, abantu abaninzi bacinga ukuba le yinto emnandi.
Nangona kunjalo, abakhange balinge babuze ngqo uWarnia, usihlalo, ke banokusebeza omnye komnye.
Kungekudala, umphathi omdala waphakama wathi: “Sihlalo, ngokokwazi kwam, uNippon Steel akazange azimisele ukuncama izabelo ezilawulayo. Ngaba elinye iqela liya kulizalisekisa ikhontrakthi olikhankanyileyo? Okanye, ngaba kukho amagatya afihlakeleyo kwisivumelwano, okanye izivumelwano zokungcakaza ezinzima? ”
Ngapha koko, imigibe yesivumelwano ixhaphake kakhulu.
Ongxowankulu abaninzi abazinzileyo bayathanda ukuseta abachasi babo okanye abalingane babo kwisivumelwano.
Oosomashishini abaninzi bafumana utyalomali ngesisa koongxowankulu xa beqala amashishini abo, kwaye bazimisele ukwenza umsebenzi omkhulu.
Wenze kakuhle, ngokwendalo wonke umntu wonwabile.
Kodwa ukuba awuyenzi kakuhle, iya kuba yingxaki enkulu.
Abanye abatyali zimali bafuna ukuba abatyali mali bongeze umda ongenamda kunye namagatya amatyala aliqela kwisivumelwano, singasathethi ke ukuba uxanduva oludibeneyo olungenamda lunabalinganiswa abathandathu kuphela, kodwa ukunqongophala kwamandla emva kwawo kunokwenza ukuba umtyali-mali aye kumanxuwa.
Kungenxa yokuba xa isivumelwano sokudibana kunye nomthwalo osayiniweyo utyikityiwe, ukuba intengiselwano ayenzi kakuhle kwaye ilahlekelwe yimali, umtyali-mali unelungelo lokufuna ukuba umtyali-mali ahlawule epokothweni yakhe kwaye ahlawule yonke imali yotyalo-mali elahlekileyo.
Umzekelo, umnini weTangsun, eyayisakuba yinkampani yeefowuni eziphathwayo, watyikitya isivumelwano sokusebenzisana kunye noxanduva, emva kokungaphumeleli kweshishini, wayesenetyala ukuya kuthi ga kwizigidi ezingama-400 ematyaleni.
Baninzi abasunguli beenkampani abathi, ngenxa yokuba bengenako ukubuyekeza abatyali mali, ekugqibeleni bagxothwa kwiinkampani ababesebenze nzima ukuzenza, bade banemali baya entolongweni.
Ke ngoko, abalawuli bakhathazekile malunga nokuba ngaba kukho nawaphi na amagatya ongcakazo afanayo kwisivumelwano esisayinwe nguWarnia.
UWarnia khange achaze okuninzi, ukhuphe ikhontrakthi kubhaka wakhe wathi, “Esi sisivumelwano sokuqala esityikitywe nguSihlalo weNippon Steel uShininwa Watanabe kunye nam. Ungayijonga kwaye ubone ukuba kukho naziphi na iinkcukacha ngokwemiqathango. akhongxaki."
Umlawuli omdala wolula isandla sakhe ukuba amkele ikhontrakthi, kwaye isihlwele sabanye abantu salinda ngokungxama.
Nditsho neNgoma yakudala ayinakuzibamba kancinci, yaya phambili ukubona okwenzekileyo eJapan.
Xa wonke umntu wasibonayo isivumelwano, amehlo akhe aba makhulu kwaye makhulu.
Ngokwenene esi sisivumelwano esisemthethweni, kwaye imigaqo icacile kwaye ilula, akukho magama acacisayo asezantsi, kwaye akukho mxholo ufihla umngcipheko kwishishini.
Ekugqibeleni, kukho itywina elisemthethweni leNippon Steel kunye ne-autograph kaWatanabe Shinka. Ngokwenene sisivumelwano esinyanisekileyo nesisebenzayo.
Okwangoku, wonke umntu akanakunceda kodwa akonwabe.
Ngochulumanco umphathi omkhulu wathi: “Owu, andizange ndimbone uNippon Steel etyikitya ikhontrakthi enkulu kangaka! Oku kunokuthiwa akunakuthelekiswa nanto! Ubuso beNgoma yethu kaSihlalo bukhulu ngokwenene! Ubuso, ubuncinci buxabisa iibhiliyoni ezimbini okanye ezintathu! Ngaphezulu! ”
Abanye bavumile: “Ewe, uSihlalo weNgoma uphumelele ikhontrakthi entle kangaka evela kwiNippon Steel, ephantse yaviwa kwimbali yenkampani. Ukuba sibhengeza ezi ndaba kwilizwe langaphandle, ixabiso lesitokhwe ngokuqinisekileyo liya kukhawuleza. Ngapha koko, inyuka isibhakabhaka! ”
Umntu othile wajonga ixesha wakhupha la mazwi: “Iindaba zokubuya kukaSihlalo weNgoma ngokukhuselekileyo ziqikelelwa ukuba zikhutshwe ngamajelo eendaba. Ezi yayiziindaba ezimnandi ekuqaleni. Ngoku kukho esi sivumelwano seNippon Steel. Yaziswa eluntwini, zimbini izibonelelo ezinkulu! Xa isitokhwe sethu siqala kwakhona ukurhweba, ngokuqinisekileyo iya kwandisa umda wayo wemihla emithathu okanye emine ngokulandelelana! Ixabiso lentengiso leqela linokunyuka nge-30 ukuya kwi-40%!
"Sihlalo wengoma, ulithathile eli qela lengoma elixesha!"
UWarnia uthethe nzulu ngeli xesha: “Isizathu sokuba intsebenziswano yeNippon Steel kungathethathethwana ngayo kwaye ifumane amagama okhetheke kangako kungenxa yokuba uMnu. Wade wanceda ukuyiplahla ibhulorho. Usihlalo weNippon Steel uWatanabe Shinka utyikitye kuphela ngenxa kaMnu. Wade, ngoko umbulelo uya kuMnumzana Wade. ”
Emva kwayo yonke loo nto, wajonga uCharlie wathi ngokunyanisekileyo: “Mnu. Wade, yonke into inombulelo kuwe ngeli xesha. Ukuba ibingenguwe, ngendandifele eJapan; ukuba bekungengenxa yakho, ngesele ebulewe uTatomkhulu. Ityhefu yonakalisa ingqondo; Ungayichazanga eyokuba usenokufumana iimeko ezintle njengeNippon Steel… UWarnia unombulelo kakhulu… ”
UCharlie wancuma kancinci: “Awudingi ukuba nembeko kangaka, zizinto ekufuneka zenziwe ngabahlobo, umzamo nje omncinci.”
Emva kokuthetha lento, uCharlie waphakama wathi, “Warnia, ubuyile nje, kwaye kukho izinto ezininzi kwiqela ezilindele ukuba uthathe isigqibo. Andizukukhathaza kakhulu. Kwenzekile ukuba uphume kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo. Kufuneka ndibuyele kwakamsinya. Ikhaya lilindelwe ndim. ”
Akukuva oku uWarnia, kwangoko wathi: “Mnu. Wade… Ndiyazibuza ukuba akukho lula na ukuba nitye isidlo sasemini kunye? Ininzi into osenzele yona, kwaye khange sibenalo ithuba lokukubulela ..…. ”
UCharlie wancuma wathi: “Khange nditsho ukuba akufuneki ube nembeko kangaka? Ungawenza umsebenzi wakho kuqala. Singatya nanini na xa sifuna ukutya. Singakwenza idinga xa ugqibile umsebenzi wakho. ”
UMdala uNgoma ukwathe kwicala: "Ewe Warnia, uMnu. Wade ebengekho ekhaya iintsuku ezimbalwa ngenxa yenu, kungoko ke kufuneka abuye umva kungekudala ayokwazisa usapho lwakhe."
UWarnia wanqwala intloko esithi: “Mnu. Wade, emva koko ndiza kukuthuma… ”
"Akukho mfuneko." UCharlie uthe: “Ungaqhubeka nokuthetha naye wonke umntu malunga nomsebenzi ngelixa belapha. Ubuyile ngoku, kwaye intsebenziswano yeNippon Steel kuye kwaxoxwa ngayo. Kuyacaca ukuba kufanele kubanjwe usuku olunye. Inkomfa yoonondaba ngoku, ke thatha ixesha lakho uzilungiselele kwaye uzame ukwandisa impembelelo yakho. Izakunceda wena neQela leeNgoma. ”
UWarnia wanqwala ngentetho yombulelo wathi, “Kulungile Mnumzana Wade, uWarnia uyazi, emva koko kufuneka uhambe, ndizokulungiselela isidlo ngenye imini, kwaye kufuneka uze ngeloxesha…”
UCharlie wancuma wathi: “Kulungile ke, ndiza kubuyela apha.”
Emva koko, waphakamisa isandla esiya kuMnumzana Ingoma kwakhona: “Xhego, ndiyahamba ngoku.”
UMnu.Ngoma ngokungxama waqubuda nzulu wathi ngentlonipho, "Mnu. Wade, hamba ngokukhuselekileyo… ”
UCharlie uphume kwiholo yokunika ingxelo, kwaye bobabini u-Issac no-Orvel balinda ngentlonipho ngaphandle komnyango.
Akumbona ephuma, uIsaac wakhawuleza waya phambili wathetha ngelizwi eliphantsi: “Mfundisi, imoto ilungile, ndiza kukugodusa okanye?”
UCharlie uthe kancinci, “Ndicinga ukugoduka.”
U-Orvel, owayesecaleni, naye waleqa wacela imiyalelo: “Mnu. Wade, umakazi wakho ebeseLalini kusuku lwesithoba. Kwezi ntsuku zimbini, ebekhala kwaye elila ngalo lonke ixesha ukuba abuyele umva, ebangela abamelwane belali yesixeko ukuba babize i-911 bakhalaze. Sele imijikelezo eliqela, uyafuna ukumyeka ahambe? ”